‘Black Panther’ ရုပ်ရှင်အတွက် သီချင်းတွေဖန်တီးပေးမယ့် Kendrick Lamar
On January 5, 2018 January 22, 2018 By Atsuko
မကြာမီထွက်ရှိမယ့် Marvel Studios ရဲ့ ‘Black Panther’ ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါဝင်မယ့်သီချင်းတွေကို ဖန်တီးပေးမယ့်သူကတော့ Grammy ဆုပေါင်း ၇ ဆု ဆွတ်ခူးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ rapper ကြီး Kendrick Lamar ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ Lamar နဲ့ SZA တို့တွဲဖက်သီဆိုထားတဲ့ ‘Black Panther: The Album’ ရဲ့ ခေါင်းစီးသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “All The Stars” ကို နားထောင်ကြည့်လို့ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
Lamar ဒီလိုသီချင်းဖန်တီးပေးတာဟာ Marvel Cinematic Universe ရဲ့သမိုင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ရုပ်ရှင်တစ်ကားအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး သီးသန့်သီချင်းတွေဖန်တီးထည့်သွင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ‘Black Panther’ ရုပ်ရှင်ရဲ့ဒါရိုက်တာ Ryan Coogler က အဆိုတော်တွေအများကြီးထဲကမှ စိတ်တိုင်းကျရှာဖွေပြီး Lamar ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Coogler က “ကျွန်တော် Lamar လိုအရမ်းတော်တဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်နဲ့တွဲဖက်ပြီး အလုပ်လုပ်ခွင့်ရတာ အတိုင်းမသိဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ Lamar ဖန်တီးတဲ့သီချင်းတွေဟာ Black Panther ရုပ်ရှင်မှာ ကျွန်တော်ဖန်တီးလိုတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ကိုက်ညီတယ်ထင်လို့ သူ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့လက်ရာတွေကို အပြည့်အဝနားထောင်ရမှာကို အရမ်းမျှော်လင့်နေမိပါတယ်။” လို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
“I am honored to be working with such an incredible artist whose work has been so inspirational, and whose artistic themes align with those we explore in the film. I can’t wait for the world to hear what Kendrick and TDE have in store.” Kendrick Lamar
ဒါ့အပြင် Lamar ကလည်း Marvel Studios ရဲ့ ‘Black Panther’ ရုပ်ရှင်ဟာ သရုပ်ဆောင်တွေကအစ ဒါရိုက်တာထိအဆုံး အရမ်းကိုကောင်းမွန်တဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလိုခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့ project တစ်ခုမှာ သူတတ်ကျွမ်းတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အရမ်းကိုဂုဏ်ယူမိပါတယ်လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါသေးတယ်။
“Marvel Studios’ Black Panther is amazing, from its cast to its director. The magnitude of this film showcasesagreat marriage of art and culture. I’m truly honored to contribute my knowledge of producing sound and writing music alongside Ryan and Marvel’s vision.” Kendrick Lamar
Kendrick Lamar ရဲ့လက်ရာအပြည့်အစုံကို ‘Black Panther’ ရုပ်ရှင်ရုံတင်မယ့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်နေ့ကျရင်နားထောင်လို့ရမှာပါ။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ Amazon Music ၊ Apple Music ၊ iTunes နဲ့ Spotify စတဲ့ service တွေမှာ pre-order ပြုလုပ်လို့ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
PREVIOUS POST Previous post: မူပိုင်ခွင့်ပြဿနာကြောင့် ဒေါ်လာ ၁.၆ ဘီလီယံ လျှော်ကြေးတောင်းခံရတဲ့ Spotify
NEXT POST Next post: ‘T-ara’ နာမည်ကို မူပိုင်ခွင့်တင်လိုက်တဲ့ MBK Entertainment